Iindaba -umahluko phakathi kwentshukumo yemoto kunye nemoto eqhelekileyo
I-motor vibration ixhotyiswe ngeseti yeebhloko ze-eccentric ezinokutshintshwa kumacala omabini e-shaft shaft, kwaye amandla oxhokonxayo afunyanwa ngamandla e-centrifugal aveliswe kukujikeleza kwesantya esikhulu kunye nebhloko ye-eccentric. Uluhlu lokuhamba lokuhamba kweemoto ezingcangcazelayo lukhulu, kwaye ingxolo yoomatshini inokuncitshiswa kuphela xa amandla oxinzelelo kunye namandla ehambelana ngokufanelekileyo. Zintandathu izinto ezahlulahlula iimoto zentshukumo ngokwendlela yokuqala kunye nokusebenza kunye nesantya sokusebenza.
Imoto eqhelekileyo eyaziwa ngokuba yi "motor" ibhekisa kwisixhobo se-electromagnetic esiqonda ukuguqulwa okanye ukuhanjiswa kwamandla ombane ngokomthetho wokungeniswa kombane wombane. Imoto imelwe ngunobumba M kwisekethe (imigangatho yakudala nguD). Umsebenzi wayo ophambili kukuvelisa i-torque yokuqhuba. Njengomthombo wamandla kwizixhobo zombane okanye oomatshini abohlukeneyo, umvelisi umelwe ngunobumba G kwisekethe. Umsebenzi wawo ophambili Yindima kukuguqula amandla oomatshini abe ngamandla ombane.
Uyintoni umahluko phakathi kwentshukumo yentshukumo kunye nemoto eqhelekileyo?
Ubume bangaphakathi bentshukumo yemoto efanayo naleyo yeemoto eziqhelekileyo. Umahluko ophambili kukuba ukungcangcazela kweemoto kufakelwe iseti yeebhloko ze-eccentric ezinokuhlengahlengiswa kuzo zombini iziphelo ze-rotor shaft, kwaye amandla oxhokonxa afunyanwa ngamandla e-centrifugal aveliswe kukujikeleza kwesantya esikhulu kunye nebhloko ye-eccentric. Iimoto ezitshintshayo zifuna ukuthembeka ukungqinisisa ukungcangcazela kwimicimbi yoomatshini kunye nombane kuneemoto eziqhelekileyo. I-rotor shaft yemoto engcangcazelayo yenqanaba lamandla efanayo iyatyeba kakhulu kunaleyo yemoto eqhelekileyo yenqanaba elifanayo.
Ngapha koko, xa i-vibration yeemoto iveliswa, ukucoca okuhambelana phakathi kweshafti kunye nokuthwala kwahlukile kuleyo yeemoto eziqhelekileyo. Shaft kunye nokuthwala kweemoto eziqhelekileyo kufuneka zifaniswe ngokusondeleyo, kwaye ukucocwa okuhambelana phakathi kweshafti kunye nokuthwala kwimoto yokungcangcazela kukulingana okushelelayo. Kukho umsantsa we-0.01-0.015mm. Ewe uya kuziva ukuba ishafti iya kuhamba ngasekhohlo nasekunene ngexesha lolondolozo. Ngapha koko, lo mngxunya wokukhutshwa unendima ebalulekileyo.